Fakan-kevitra momba ny lalàna momba ny fanitarana ny seranam-piaramanidina Heathrow
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Fakan-kevitra momba ny lalàna momba ny fanitarana ny seranam-piaramanidina Heathrow
Enga anie 15, 2019
Nanambara i London Heathrow fa hanomboka amin'ny 12 Jona ny fakan-kevitra momba ny lalàna 18 sy antsasak'adiny momba ny drafitra fanitarana azy. Ity dingana ity no laharam-pahamehana farany ho an'ny tetikasan'ny fotodrafitrasa nasionaly mitsikera, ary ny valiny voaray dia hiditra amin'ny fampiharana drafitra farany. Ho fanamarihana ny vaovao, namoaka andian-tsary vaovao mampiseho ny ohatra azo alaina amin'ny fotodrafitrasa faran'ny terminal ny seranam-piaramanidina, ary koa ny fitifirana an'i Heathrow ho avy.
Ny fakan-kevitra momba ny seranam-piaramanidina amin'ny volana jona no ho fampiharana farany lehibe indrindra sy fanavaozana farany. Heathrow dia nanambola tamin'ny teknolojia vaovao hanehoana amin'ny besinimaro ny tolo-keviny ankehitriny, ao anatin'izany ny maodelin'ny seranam-piaramanidina ho avy izay mampiasa augmented reality, ary booth feo izay hampiasaina amin'ny toerana sasany izay manasongadina ny zava-misy virtoaly hanehoana ny vokatry ny insulated tabataba amin'ireo fananana tototry ny tany. amin'ny fiaramanidina. Rehefa avy nihaino ny fanehoan-kevitra tamin'ny consultations teo aloha i Heathrow dia hanao hetsika amina toerana maro kokoa noho ny teo aloha, ary ho fanampin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fanaovana dokambarotra nasionaly manerana ny gazety, radio, takelaka, nomerika ary - sambany - Spotify, dia hifandray amin'ny 2.6 tapitrisa tokatrano mivantana eo amin'ny manodidina ny seranam-piaramanidina miaraka amin'ny taratasy mivalona mamporisika ny fandraisana anjara.
Ny fifampidinihana dia taorian'ny fanilihan'ny Fitsarana avo ny fanamby ara-dalàna manohitra ny fanitarana an'i Heathrow. Ny adihevitra momba ny drafitr'i Heathrow - sy ny fanoloran-tenany hitombo ny faharetana - dia efa nahazo ary nandresy, na tao amin'ny Parlemanta izany na tany amin'ny fitsarana ankehitriny.
Heathrow dia naneho fomba fanao tsara indrindra tamin'ny alàlan'ny fanatontosana fifampidinihana fanampiny amin'ny dingana voalohan'ny fampandrosoana ny tetikasa mba hahazoana antoka fa ampidirina ao anaty drafitra ny fanehoan-kevitra, ary mba hangarahara araka izay azo atao momba ireo tolo-kevitra nipoitra. Ny drafitra naseho tamin'ity fifampidinihana ity dia misy ny tamberina natambatra voaray tamin'ny fifampidinihana Airspace sy ny ho avy nifarana tamin'ny volana martsa, sy ny fifampidinihana teo aloha tamin'ny taon-dasa, ary koa ny fifandraisan'i Heathrow mitohy amin'ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana, manampahefana eo an-toerana, kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ary antoko liana hafa.
Ny fakan-kevitra amin'ny ho avy dia hitady valiny amin'ireo lafin-javatra efatra lehibe:
Drafitra tian'i Heathrow ho an'ny fanitarana: ny tolo-kevitray momba ny fisian'ny seranam-piaramanidina ho avy ao anatin'izany ny làlambe sy ny fotodrafitrasa seranam-piaramanidina hafa toy ny terminal sy fidirana amin'ny lalana. Ny masterplan dia hampiharihary ihany koa ny fitomboan'ny seranam-piaramanidina amin'ny dingana - hatramin'ny fisokafan'ny làlambe tamin'ny taona 2026, hatramin'ny farany ny drafitra manodidina ny 2050. Ity fitomboan'ny fotodrafitrasa mitombo ity dia hifanakaiky kokoa amin'ny fitomboan'ny mpandeha, ary hanampy ny saram-piaramanidina hijanona eo akaikin'ny haavon'ny 2016 - amin'ny farany miteraka saran-dàlana mora vidy kokoa ho an'ny mpandeha;
Drafitra hampiasana ny seranam-piaramanidina ho avy: ny fomba hampiasana ny seranam-piaramanidina fiaramanidina telo ho avy, ao anatin'izany ireo singa manan-danja toy ny sidina amin'ny alina, ary koa ny fomba mety hampiasana sidina fanampiny alohan'ny hisokafan'ny runway vaovao amin'ireo lalamby roa misy antsika;
Fanombanana ny fiantraikan'ny fitomboan'ny seranam-piaramanidina: ny fanombatombanana mialoha antsika amin'ny mety ho fiantraikan'ny fanitarana ny tontolo iainana sy ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana;
Drafitra hitantanana ny fiantraikan'ny fanitarana: hametraka ny drafitry ny seranam-piaramanidina izahay hanamafisana ny vokan'ny fanitarana, ao anatin'izany ny fanonerana ny fananana, ny Polisy momba ny fisondrotan'ny Noise, ny Vola onitra ho an'ny vondrom-piarahamonina, ary ny fepetra entina manalefaka ny fahalotoan'ny rivotra, ny karbaona, ary ny fiantraikan'ny tontolo iainana hafa.
Nanasa ny olona handray anjara amin'ny fifampidinihana i Emma Gilthorpe, talen'ny Executive Expansion an'ny Heathrow, nilaza hoe:
“Tetikasa manan-danja lehibe eo amin'ny firenena sy eo an-toerana ny fanitarana an'i Heathrow, ary manankina ny fitomboan'ny harinkarenan'ity firenentsika ity. Seranana seranam-piaramanidina mivelatra no ahafahan'ny firenena miditra amin'ny ankamaroan'izao tontolo izao, mamorona asa an'arivony eo an-toerana sy amin'ny firenena ary hanokatra lalam-barotra vaovao io. Saingy tsy afaka manatanteraka ireo drafitra ireo irery izahay. Manentana ny rehetra izahay mba hanana ny heviny amin'ity consultation ity, hamolavola ny drafi-pontsika ary hanampy anay amin'ny fanitarana amin'ny fomba marina sy maharitra indrindra. ”
Taorian'ny faran'ity dinika ity ary aorian'ny nampidirina ny hevitra, dia handefa tolo-kevitra farany ho an'ny Inspecteur de ligne i Heathrow amin'ny taona 2020, hanombohana ny fizotran'ny fankatoavany. Ny fanapahan-kevitra momba ny fanomezana ny DCO dia hataon'ny sekreteram-panjakana aorian'ny fotoam-panadinana ampahibemaso izay notarihin'ny Inspecteur d'e plan.
Centara Signs MOU miaraka amin'ny KMA Hotels ho an'ny hotely enina Myanmar
Oganda: manomboka ny asa amin'ny Kampala tetikasa Flyover $ 60 M
Ny fifandraisana manokana misy eo amin'ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany sy ny fanjakan'ny Eswatini
Mody adala mody avy any Portiogaly i Britanika mba handresy ny fe-potoana farany famaranana ny quarantine
Vaovao momba ny dia any Pakistan
Punjab any Pakistan: Tsy misy vaksiny COVID-19, tsy misy finday!
Ny fanandramana PCR any Seychelles dia tsy fanelingelenana akory
Firenena afrikanina 9 amin'ny 10 no vonona hametraka tanjona vaksinin'ny COVID-19 maika
Vaovao momba ny dia any Serbia
Ny olona Serba dia manana fona lehibe mandritra ny COVID mampiseho vina ho an'ny fizahan-tany sy tanjaka
Etazonia sy Angletera dia nifindra hanokatra lalantsara fitsangatsanganana